Umatshini wokufumana umbona kwiNigeria naseMzantsi Afrika
Umbona sisityalo esibalulekileyo sokudla okuziinkozo.Ukusetyenziswa komhlaba wonke kombona kungaphezulu 116 izigidi zeetoni.kwi-Sub-Saharan Africa, 50% yabantu batya umbona ngelixa lonke ilizwekazi lase-Afrika lilungiselela 30% Ukusetyenzwa kombona kuMhlaba jikelele.Nigeria ngowona mveliso mkhulu wombona waseAfrika, imveliso yakhe iphelile 10 iitoni zesigidi zombona, kulandele uMzantsi Afrika. Umbona usasazeke ngokweendawo zonke eNigeria kwaye ulungele uninzi lwabemi baseNigeria. Phantse 8,0 iitoni zesigidi sengqolowa iveliswa apha eMzantsi Afrika minyaka le 3,1 Isigidi sehektare yomhlaba Isiqingatha semveliso siqulathe umbona omhlophe ukuze kutyiwe ukutya kwabantu.
Imicelimngeni ebalulekileyo ejongene nemveliso yengqolowa yase-Afrika ayonelanga koomatshini bezolimo kunye nokusebenza kwemveliso ephantsi, ngakumbi umatshini wombona. Ngokwedatha ye 2014, zingaphantsi kwe 10 ibeka umatshini wombona wombona weekhilomitha ngeekhilomitha zolimo lwaseAfrika, kuthelekiswa ne 257 iiseti e-United Kingdom, 200 iiseti e-United States, 130 iiseti eIndiya, kwaye 125 iseti eBrazil. Ke ngoko, ukukhuthaza ukungeniswa kwemveliso yombona engenziwanga nto iyeyona nto ibalulekileyo kwilizwe lase-Afrika lokuphuhlisa ezolimo kunye nokuphucula ukwenziwa kwemveliso yezolimo.
In 2014, Umongameli waseNigeria uJonathan uyalele i-Central Bank yaseNigeria ukuba iseke i 50 bhiliyoni kunye ne-fund yokuphuhlisa o matshini wezoqoqosho kwezolimo ngokukhawuleza ukuxhasa imveliso yezolimo eNigeria. Le ntshukumo izibophelele ekukhawuleziseni ukuqondwa kwephepha lokushicilela ukuze kusekwe 1,200 oomatshini bokuqeshisa iinkampani kwilizwe liphela kwaye zikhuthaza "inguqu kwezolimo" eNigeria.
Ngokweemfuno zentengiso yaseAfrika ,IVICTOR FARM MACHINERY iphuhlise iintlobo ezimbini zomatshini wombona ukuze kuncede ukuveliswa kombona kwilizwe laseAfrika.Omnye umatshini wombona ,Omnye ngumatshini wombona kunye nomatshini odibeneyo.
Umatshini wokubhula wombona usetyenziselwa ukwahlula iinkozo kwii-cobs. Ngaphambi kokhuselo, amagqabi asuswe ngesandla. Ukubhula kombona kusetyenzwa ngesandla okanye kusetyenzwa amandla. Umatshini okhusela umbona uneesilinda , indibano ye-concave kunye neyunithi yokuvuthuza. Umbona wombona untyiswa phakathi kwesilinda kunye ne-concave kunye neekhonkrithi zisuswa isenzo se-lugs. Ukubetha kococa izixhobo ezikhaphukhaphu kunye namaqhezu amancinci obuciko kunye nengqolowa ecocekileyo eqokelelweyo. I 5-10 hp imoto yombane okanye ipetroli ipetroli inokusebenza kumatshini. Inokunika ukukhutshwa kwe-1 ~ 2tons .oluhlobo lomatshini wombona wokubhula ubungakanani obuncinci kunye nexabiso eliphantsi ,iyaziwa kumlimi wombona.
Uhlobo lwesibini ngumatshini osebenza ngemisebenzi emininzi ,zidityaniswe ngombona we-peeler,ekubhuleni kombona kunye negqabi lomthi wengqolowa. Isetyenziselwa ukugqobhoza kunye nokubhula kwi-cobs yombona ngaxeshanye. Kwindawo yokugcina izilwanyana e-spike, izikhonkwane zigxunyekwe kwiindawo eziphakamileyo ezahlukeneyo ukuze kube lula ukusebenza ngokukhuselekileyo. Ukusebenza kweShelling malunga 100% kuzo zombini iimeko kunye neenkozo ezaphukileyo zingaphantsi 2.0%. Umatshini wokutsala umbona usindisa uninzi lomsebenzi xa uthelekiswa nenkqubo yemveli.
Zombini ezi ntlobo zoomatshini zinexabiso eliphantsi kwintengiso yase-Afrika.VICTOR FARM MachINERY can a power custom ,ukupeyinta kunye ne-logo ngokweemfuno zomsebenzisi.